KOONTADAADA WAA LA JOOJIYAY FADLAN ARAG MAAMULAHA NIDAAMKAAGA [XALIYAY] - JILICSAN
Koontadaada waa la joojiyay Fadlan arag maamulaha nidaamkaaga [XALIYAY]
La dhajiyayMarkii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyay: Febraayo 17, 2021
Mararka qaarkood Windows-ku wuxuu tuuraa khaladaad lama filaan ah, mid ka mid ah khaladaadkaasna waa Akoonkaada waa la curyaamiyay. Fadlan arag maamulaha nidaamkaaga markaad isku dayayso inaad gasho Windows. Marka la soo koobo, khaladku wuxuu muujinayaa in si uun koontada maamulaha la curyaamiyay Windows 10 mana awoodi doontid inaad mar kale gasho ilaa xisaabta dib loo furo.
Arrinkani waxa uu dhici karaa haddii aad si lama filaan ah dib ugu bilawday kombayutarkaga inta lagu guda jiro habka Soo celinta, Dib u Dajinta ama Cusboonaysiinta Mararka qaarkood barnaamijka xisbiga 3aad wuxuu waxyeeleeyaa nidaamkaaga oo kaa xidhaa xisaabaadka maamulka, taasoo kuu horseedaysa fariintan khaladka ah. Haddii aad abuuraysay akoon cusub oo nidaamka dib loo bilaabay iyada oo aan hawsha la dhamaystirin, markaas waxa aad arki doontaa defaultuser0 sida username marka aad isku dayayso in aad gasho akoonkan, oo waxa ay tusi doonta fariinta khaladka ah ee Koontadaada La Nafo. Fadlan arag maamulaha nidaamkaaga.
Isticmaalayaashu ma garanayaan waxay sameeyaan maadaama gabi ahaanba laga xiray akoontooda, waxna ma xallin karaan ilaa ay si uun u galaan akoonkooda ama Windows. Si kastaba ha ahaatee, annagoon wax wakhti lumin, aynu aragno sida dhabta ah ee loo hagaajiyo Koontadaada ayaa la curyaamiyay. Fadlan eeg fariinta khaladka ah ee Maamulaha Nidaamkaaga oo leh talaabooyinkan hoos ku qoran.
Habka 1: Dhaqdhaqaaqa Akoonka Maamulka Adeegga Degdegga Amarka
Habka 2: Abuur Account User Cusub oo leh mudnaanta maamul
Habka 3: Isticmaalka Isticmaalaha Maxaliga ah iyo Koox-soo-galinta
1. Tag Shaashada Login-ka oo aad ku aragto fariinta khaladka ah ee kor ku xusan ka dibna dhagsii Badhanka tamarta markaas Qabo Shift iyo guji Dib u bilow (inta aad hayso badhanka shaqada).
2. Hubi inaadan sii deyn badhanka Shift ilaa aad ka aragto Soo kabashada sare ee Options menu.
3. Hadda u gudub kuwan soo socda ee menu-ka Xulashada Soo-kabashada Sare:
Cilad-bixinta> Xulashooyinka horumarsan> Dakhliga amarka
4. Ku qor amarka soo socda cmd oo ku dhufo Enter:
net user admin / firfircoon: haa
5. Dib u bilow kombayutarkaga, waxaana laga yaabaa inaad awooddo Hagaaji akoonkaaga waa la joojiyay. Fadlan eeg fariinta khaladka ah ee Maamulaha Nidaamkaaga.
1. Marka hore waxaad tagtaa shaashadda Login oo aad ku aragto fariinta qaladka ah ka dibna ku dhufo Power button ka dib Qabo Shift ka dibna dhagsii Dib u bilow
Cilad-sheegid > Ikhtiyaar sare > Dejinta bilowga > Dib u bilaw
4. Marka aad gujiso Restart PC-gaagu dib ayuu u bilaabmi doonaa, waxaadna arki doontaa shaashad buluug ah oo ay ku jiraan liis xulashooyin ah hubi inaad riixdo furaha lambarka ku xiga ikhtiyaarka kaas oo leh Daar Qaabka Badbaado leh oo leh Command Prompt.
5. Marka aad gasho Account Administrator oo ah hab badbaado leh, fur dhaq-dhaqaaqa amarka oo ku qor amarka soo socda cmd oo ku dhufo Enter:
isticmaalaha saafiga ah /ku dar
net maamulayaasha kooxda maxalliga ah /dar
6. Si aad dib u bilowdo nooca PC xirid/r gudaha cmd oo ku dhufo Gelida.
7. Waxaad si guul leh u samaysay akoon isticmaale cusub oo leh dhawrsanaan maamul.
Fiiro gaar ah: Haddii aadan ku kicin karin Habka Badbaadada ah sabab qaar ka mid ah, waxaad u baahan tahay inaad doorato Command Prompt from Troubleshoot> Xulashada sare> Command Prompt in Advanced Recovery Options menu ka dibna ku qor amarka loo isticmaalo tallaabada 5 oo sii wad.
Markaad abuurto akoon isticmaale cusub oo leh mudnaanta maamul, waxaad u baahan tahay inaad gasho oo aad raacdo habka hoos ku qoran.
1. Riix Windows Key + R ka dibna ku qor lusrmr.msc oo ku dhufo Enter.
2. Hadda, ka menu-gacanta bidix, ka dooro Isticmaalayaasha hoostooda Isticmaalayaasha iyo Kooxaha Maxaliga ah.
3. Marka xigta, daaqada gacanta midig laba jeer guji Maamule ama koontada aad wajaheyso arinta.
4. Hubi inaad doorato tabka Guud iyo uncheck Account waa naafo . Sidoo kale, uncheck Account waa quful si loo hubiyo.
5. Guji Codso, oo ay ku xigto OK.
6. Xir wax walba oo dib u bilow kombayutarkaga si aad u badbaadiso isbedelada.
7. Mar labaad isku day inaad gasho akoonkii hore u muujinayey qaladka.
Dami faylalka bogga Windows iyo hibernation si aad u xorayso meel bannaan
Ka hel erayga sirta ah ee WiFi ee la ilaaway gudaha Windows 10
Hagaaji CD/DVD-ga oo aan ka muuqan Windows Explorer
Sida Loo Hagaajiyo Shilalka Kombiyuutarka ee Qaab Badbaado leh
Taasi waa waxa aad si guul leh u heshay Hagaaji akoonkaaga waa la joojiyay. Fadlan arag maamulaha nidaamkaaga fariin khalad ah, laakiin fadlan ku weydii qaybta faallooyinka haddii aad weli wax su'aalo ah ka qabtid qoraalkan, fadlan ku weydii qaybta faallooyinka.
Aditya waa xirfadle ku takhasusay tignoolajiyada macluumaadka iskiis u dhiirigeliya wuxuuna ahaa qoraa tignoolajiyada 7dii sano ee la soo dhaafay. Wuxuu daboolaa adeegyada internetka, mobilada, Windows, software, iyo sida loo hago.